တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဘလော့နာကျခြင်း ....
Posted by မေဓာဝီ at 11:02 AM
haha. yah ma may , it it right. I was like those too, but now free abit as no internet connection . lucky i am the first to comment now. Ma So what, you are loooserrrr..hahahah;)
ဘလော့ရောဂါ စွဲကပ်လာ၊ လျင်စွာကုဖို့ပြင်၊ မကုစားပဲ ဘလော့စွဲ…. အဲ.. မဆက်တတ်တော့ဘူး.. ဟိဟိ
အဟင့်...သွားရှာပြီပေါ့လေး...မမေက ကျုပ်အလုပ်က အိမ်ပြန်ချိန်မှ ပို့စ်တင်တော့ ကျုပ်ကွန်မန့်ရေးချိန်မရလိုက်တာပါ ကိုမင်းမင်းရယ်...နောက်တစ်ပွဲပေါ့ ငှဲငှဲ...နက် မရသေးလို့ အလျှော့ပေးထားတယ်မှတ်ပါ...:P
မမေရေ ၁နှစ်ရှိတော့မယ်ဆိုတော့လည်း ဘလော့နာကျသင့်ပါတယ်...ဟီဟီ။။။ညီမလေးတော့ ကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် သိပ်တောင် စိတ်မ၀င်စားတော့သလိုပဲ...:D
6/12/2007 3:34 PM
Nice to read this post , ma may.
Blog is web diary.
So many people write blog for their daily diary.
When we get old , that would be the memoir or rememberance or something else.
But in negative view, the others would know my secrets. But, who cares?
သူတို့ တကယ်တည်းသမားတွေက တော်သေး..
ဒီမှာတော့ ချစ်ချစ်က ဘယ်တော့ ထရိုက်မလဲ မသိ။
ဒီကြားထဲ အသက်အရွယ်ကြောင့် ခါးနာတောင် မညည်းရဲ.
တော်ကြာသူက ဘလော့ကို မျက်စောင်းထိုးမှာစိုးလို့။
ဘလော့လေးကိုတော့ မျက်စောင်းတောင် အထိုးတောင်မခံနိုင်ပါ..
ဘလော့ရောဂါ စွဲကပ်လာ၊ လျင်စွာကုဖို့ပြင်၊
6/12/2007 3:41 PM
မကုစားဘဲ ဘလော့ဂ်စွဲ၊ မျက်စိမွဲမှာပင်
မျက်စိမွဲလဲ စွဲစွဲမြဲ မရေး မနေချင်
ပျော်ကာ မော်ကာ ရေးဖတ်မှာ
ဘလော့ဂါ ပြုံးရွှင်ရွှင် …။
ကဗျာလေး ပိုလှမလားလို့ လက်ဝင်ဆော့တာပါ။ ကျနော်ကတော့ ဘလော့ဂ်ကို စွဲလားမစွဲလားတော့ မသိဘူးဗျာ။ ဘလော့ဂ်ကို အာရုံစိုက်ပါများလို့ ကိုယ့်အပေါ် နားအလည်ပေးနိုင်ဆုံးလူတွေကတောင် အထင်အမြင်လွဲခြင်းကို ခံနေရတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက ရေးချင်နေတဲ့ စိတ်ပဲ..။ တခုခုကို ဖတ်မိရင်လဲ တွေးလိုက်..၊ ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာလိုက်..၊ တနေရာရာကို သွားရင်လဲ `ဒါလေးတော့ ငါ့ဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်ကြတဲ့ လူတွေဖတ်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ´ လို့ အတွေးဝင်လိုက်၊ ရေးလိုက်….။ အားပေးကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေကလဲ တကယ်ကို အားဆေးပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘလော့ဂ် ရေးလိုက်၊ ပစ်ထားမိသလို ဖြစ်နေလို့ စိတ်ကောက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြေရာပြေကြောင်း ချော့လိုက်…။ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ ဒီကွန်မန့်ရေးပြီးရင် ပို့စ်အသစ် တခုရေးဖို့ အားထုတ်ရအုံးမယ်။ ယိစ်((((
6/12/2007 11:51 PM
ကျွန်တော်ကခုမှစတာ... ဒါတောင်တော်တော်စွဲနေပြီ.. ဟီး
မမေပြောသလို ညီမလည်း ဘလောဂ့်နာကျလို့ အိပ်ပျက်ရက်တွေ များလှပေါ့ ။
မမေဓာဝီတို့များ ဘလော့ဂ်စွဲနေတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တော့ နေ့တိုင်းလိုလို ရေးနေ၊ ဖတ်နေတာ တစ်ခါမှ မစွဲပါလား။ ဟဲ ဟဲ။ ကျွန်တော်ဆီလည်း လာလည်ဦးနော်..
ကျွန်တော် အမိမြေနဲ့ ဝေးနေတဲ့ မေဒါဝီဘလောခ့် ပရိတ်သတ်တယောက်ပါ။ ရန်ကုန်က ကွန်ပြူတာ ကာဖေးလ် အတွေ့ အကြုံဖြစ်နိုင်ရင် ရေးပေးလို့ ရမလားလို့ ပါ။ မမေဒါဝီ အိမ်က ကွန်ပြူတာက နေ အင်တာနက်ကို အသုံးပြု တယ်ဆိုတာကို အမ ဘလောခ် ဖတ်ရင်း ခတ်မှန်းမိပါတယ်။ သို့ သော် အိမ်မှာ ကွန်ပြူတာ မရှိတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ ဘာစည်းကမ်းတွေ၊ ဘယ်လောက်ပေးပြီး ဘယ်လို အင်တာနက်တက်နိုင်တယ်ဆို တာမျိုး ရေးပြနိုင်မယ်ဆိုရင် ဖတ်ချင်ပါတယ်။
6/14/2007 2:11 AM
ဘလော့ နာကျသူများအသင်းဖွဲ့ ရင်ကောင်းမလားပဲ အနော့်ကိုလဲ ချန်ထားနဲ့ နော် တပတ်ကို ၇ရက် ဘလော့ နာကျလဲ ရေးမြဲ ရေးလျက် ဇက်ကြောတက် ဘလော့ ရေးရင်း အသက်ထွက် :D
6/20/2007 10:30 AM